Indlela yokwenza i-Rainbow Rose (kunye nendlela esebenza ngayo)
Sayensi Iiprojekthi kunye novavanyo
Indlela yokwenza i-Rainbow Rose
I-Rose yangempela kunye nePetal i-Colors of Rainbow
Ngaba ubonile umnyama? Yinyuka, ikhulile ukuze ivelise iifalal ngemibala yemvula. Imibala ibonakala ngokucacileyo, unokucinga ukuba imifanekiso yama roses ikhutshwe ngedijithali, kodwa iintyatyambo ziyakhanya! Ngoko, unokuba uzibuza indlela imibala eyenziwe ngayo kwaye ingaba i-rose bushes ezivelisa ezi ntyatyambo zihlala ziqhakazile ngemibala enemibala. Nantsi indlela esebenza ngayo nendlela onokwenza ngayo umjiko.
I-Rainbow Real Work Roses
"U-rainbow rose" yenziwa nguPeter van de Werken, umninimzi weentyatyambo zeentyatyambo. Nangona iilesi ezikhethekileyo zisetyenzisiweyo, izityalo azizalwanga ukuvelisa imibala ecebileyo. Enyanisweni, isiqhamo sama-rose sasivame ukuvelisa i-roses emhlophe, kodwa iimpawu zeentyatyambo zijojowe ngokuhamba kwesikhathi ngeedayi ukwenzela ukuba iifalini zenziwe ngemibala ebomvu. Ukuba le ntyatyambo ayiphathwa njengokuba ikhula, iibhulo zimhlophe, kungekhona umnyama. Nangona u-rainbow ingumzekelo okhethekileyo wobugcisa, ezinye iipatheni zemibala nazo zinokwenzeka.
Akuyena inkohliso yenzululwazi onokuyifumene kakuhle kakuhle kunye nekhaya lakho elinyukayo, ubuncinane ngaphandle kokuvavanya kunye neendleko, kuba ezininzi iamolekyu ze-pigment zikhulu kakhulu ukuba zifudukele kwiipalali okanye enye inetyhefu yokuvuka kweentyantyambo . Idayi ezikhethekileyo zendalo, ezithi zenziwe kwiitokethi zityalo, zisetyenziselwa ukubala imibala.
Ukwenza iRosebow Roses ekhaya
Ngelixa ungeke uphinde uphendule imiphumo ngqo, ungayifumana ingqungquthela yombhobho usebenzisa umbala omhlophe wokutya kunye nokutya. Impembelelo yomlambo ilula kakhulu ukufezekisa ngeentyantyambo ezimhlophe okanye ezikhanyayo ezingekho njenge-rose. Imimiselo emihle ukuzama ekhaya iquka iziganeko kunye neentambo.
Ukuba kufuneka ube yi-rose, ungenza iphrojekthi efanayo, kodwa lindele ukuba kuthathe ixesha elide.
Qala nge-white rose. Kulungile ukuba i-rosebud ngenxa yokuba isiphumo sincike kwisenzo se-capillary , ukuphefumula , kunye nokusabalalisa kwientyantyambo, ezithatha ixesha elithile.
Cima i-rose ye-rose ukuze kungapheli ixesha elide. Kuthatha ixesha elongezelelweyo lombala ukuhamba ixesha elide.
Ukwahlula ngokucacileyo isiseko se-stem zibe ngamacandelo amathathu. Yenza ukucima ubude kwi-1-3 intshi. Kutheni zigaba ezintathu? Isiqongo esinqumkileyo sinyanzele kwaye mhlawumbi siphule xa usiqhekeza kwiindawo ezininzi.Ungasebenzisa isayensi yombala ukufeza ubumnandi obugcweleyo usebenzisa imibala emithathu - obomvu, obomvu, obomvu okanye obomvu, i-cyan, i-magenta - kuxhomekeke kukuphi idayi onayo maneka.
Ukugoba ngokucophelela amacandelo atyunjiweyo kancinane. Ngoku, enye indlela yokusebenzisa idayi iya kuba ukugoba iziqu zibe zintathu ziqulethwe (umz., Izibuko zembhobho), nganye iqukethe umbala omnye wedayi kunye namanzi amaninzi, kodwa oku kunzima ukuyifeza ngaphandle kokuphula iziqu. Indlela elula kukusebenzisa iiplastiki ezintathu ezincinane zeeplastiki, ii-3 zeebhola zerabha, kunye negalagi enye ende ukuba ibambe intyatyambo.
Kwingxowa nganye, yongeza inani elincinci lamanzi kunye neenamba eziliqela (10-20) zomnxeba omnye wombala. Nciphisa icandelo lesigxina kwingxowa ukuze ibhaptizwe emanzini adayiweyo, kwaye ukhusele isikhwama esijikeleze isiqu ngebhola yerabha. Phinda inqubo kunye nezinye iibhonki kunye nemibala. Yima intyatyambo kwiglasi. Hlola ukuqinisekisa ukuba ngalinye iqela le-stem libhaptizwa kumanzi, kuba intyatyambo ifuna amanzi ukuba aphile.
Unokuqala ukubona umbala kwiepalali ngokukhawuleza nje ngeyure, kodwa lindele ukuvumela i-rose iphose idayi ngobusuku okanye mhlawumbi iintsuku ezimbalwa. Iipalali ziya kuba imibala emithathu, kunye nemibala edibeneyo, ukuze iipalesi zithole amanzi ukusuka kwiindawo ezimbini zesigxina kanye. Ngale ndlela, uya kufumana yonke imvula.
Emva kweentyantyambo zemibala, ungaziqhawula isahluko esinqunyiwe se-stem uze usigcine emanzini amnandi okanye isisombululo sokutya seentyatyambo .
Iintyatyambo zithatha amanzi atshisayo ngokukhawuleza kunamanzi abandayo.
Gcina i-rose isuke ekukhanyeni nasekufudumele, kuba oku kunokubangela ukuba ibuye ihambe ngokukhawuleza.
Ukuba ufuna ukuzama ukufakela iintyatyambo ngeembala zendalo, nolu luhlu lweengulube zendalo ongayisebenzisa .
Projects Fair Fair Projects
Projects Fire Fire
I-Laundry Umtsalane okhazimulayo
Unamanzi amaninzi kwi-Apple?
Ukukhulisa i-Potassium Alum okanye i-Ruby Crystals
Indlela Yokwenza Unxantye Omsulwa
Eyona Nenene Igalelo leGazi
I-Phosphate-Buffered Saline okanye iPBS Solution
Ubomi beBlue kunye nobushushu
Indlela yokugcina i-Jack-o'-Lantern esuka ku-Rotting
Candy Projects Projects
Ikhuselekile Akukho I-Cook Insimo yeBhomu Imiyalelo
I-Ace ye-Ace ye-Admissions School Admissions Interview
Ukuguqulwa kweMelika: Imisebenzi engaxolisi
Yintoni uSono Toori Desu Ethethayo eJapan?
Ulwaphulo, ukuLawula ukuzalwa, kunye neenkolo zehlabathi
Iimpawu eziphambili ze-UFO Cases
Isibhengezo seMigaqo kwiMigqaliselo yoThutyana noHulumeni
'UDancingy Prokofiev' Umdaniso weeKtights '
I-100 aphezulu aBafazi beMbali
Yintoni i-Freezeout Poker Tournament?
Ixesha lexesha lePottery yaseGrisi lasendulo
Yintoni 'i-Snowman' eGoli?
Iinkcukacha zeMoscovium - iSlement 115
I-Biographie kunye neProfayili yoMxholo we-Deadman
I-Mystic Women: Incwadi kaBetty Friedan "Yayiqala Yonke"
Iingcebiso kubaSwimmers bokuqala
Ukuphefumula kwesisu, i-Reverse Breathing & Vase Breathing
Fumana Iimfundiso Zenyaniso kunye neParanormal Stories
Iqela leCarboxyl Inkcazo kunye nemizekelo
I-Slogans ye-Campaign ye-Presidential Campaign
Top 10 One Direction Iingoma
I-Architecture yamaThala kunye neZiko loBugcisa boBugcisa